XOG XASAASI AH:Yaa ka dambeeya mooshinka laga keenay madaxweyne Farmaajo? – Puntlandtimes
XOG XASAASI AH:Yaa ka dambeeya mooshinka laga keenay madaxweyne Farmaajo?
December 13, 2018 Puntland PL
MUQDISHO(P-TIMES)- Inkastoo ilaa maalintii shalay ahayd laysla dhex marayey in uu bur buray mooshinkii ay keeneen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaar kamid ah xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka laga dareemayaa xiisada mooshinkaasi oo weli cirka isku sii shareeray marba marka kasii dambaysa.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka guuray xarunta looga arimo Soomaaliya ee madaxtooyada ayaa waxaa la rumaysan yahay weli uusan ka tanaasulin mowqifkiisii ku aadanaa mooshinkaasi, waxaana wararkii ugu dambeeyey ee mooshinka madaxweyne Farmaajo ay sheegayaan in xiisadu ay sii cakirmayso marba marka kasii dambeeya.
Xildhibaanada kasoo hor jeeda madaxweynaha ayaa isku abaabulaya kooxo kooxo, kuwaas oo weli wado dhaq dhaqaaqyo ka dhan ah madaxweynaha iyo qaab kasta oo xilka looga qaadi karo.
Xisbiyada mucaaridka ah iyo xubnaha kasoo hor jeeda dowladda madaxweyne Farmaajo ayaan iyana ka maqnayn goobta xifaaltanku ka taagan yahay, waxaana la sheegay in arimaha ay ku lug leeyihiin xubno sar sare oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalka iyo dowladdo shisheeyo kuwaas oo danahooda ka dhex arkay haatan in kursiga madaxtinimada dalka laga tuuro madaxweyne Farmaajo.
Dowladda Imaaraadka Carabta, madaxweynihii hore ee dalka Proff. Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan kamid ah xildhibaanada Baarlamaanka sidoo kalena ah hogaanka ururka Damu Jadiid, xildhibaan Faarax C/qaadir oo xilal kasoo qabtay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xildhibaan Cumar C/rashiid Cali Sharmaake iyo weliba sidoo kale siyaasiga Bidixda fog ee C/raxmaan C/shakuur ayaa la sheegay in ay qayb ka yihiin qorshaha lagaga takhalusayo madaxweyne Farmaajo.
Ujeedka mooshinka madaxweyne Farmaajo ayaa salka ku haya xiisad siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxweynaha iyo dowladda Imaaraadka Carabta, kadib markii uu is hor taag ku sameeyey qorshayaal badan oo ay ka damacsanayd fulinteeda gudaha dalka Soomaaliya.
Arintani ayaa soo taxnayd tan iyo sanadkii tagay ee 2017 oo marar kala duwan qorshayaal daaqada lagaga saarayo madaxweynaha ay ka dambaysay dowladda Imaaraadku, waxaase sanadkani u hirgalay qayb kamid ah qorshahaasi oo uu fududeeyey gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan kadib khilaaf soo kala dhex isaga iyo madaxweynaha.
Kooxdani oo fadhigoodu yahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa xidhiidh la leh dowladda ka arimisa gudaha dalkaasi, waxaana hore uga fashilmay qorshayaal lagu manjo xaabinayo dalka.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa haatan caqabadaha ka hor taagan faragelin ay ku samayso siyaasada iyo hanaanka dowladdnimo ee dalka u aragta madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisal wasaare Khayre, waxaana taas badalkeeda ay wadaa damin ay ku bur burin rabto dowladda Soomaaliya, iyadoona Malaayiin Dollar ku bixinaysa sidii meesha looga saari lahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisal wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre.
Faarax Ciise Faarax says:
Farmaajo kama taliyo Puntland
Farnaajo kama taliyo Galmudug
Farmaajo kama taliyo Koonfur Galbeed.
Farmaajo kama taliyo Jubbaland
Intaas 98% dalka waaye. Hade waxa is weydiinta tahay: Farmaajo yaa madaxweyne uu yahay? Yaa madaxwweyne uu aqoonsan?
Soomaali waa nacday Farmaajo, cid uu metelahayo ma leh. Hadi uusan si nabad ha dalka uga bixin dagaal ayaa dalka ka qarxahaysa. Soomaali jajuuus qaainul wadan ah ma rabto.
Mid baan qof kasta oo reer Puntland ah ogyahay Waa in Farmaajo ka been yar yahay Gaas, xalay waxaa lagu dilay Boosaaso nin ganacsade ah, doraad 2 askari, bishaan gudaheeda ilaahay uun bay u xisaaban tahay inta qof la dilay, maanta Puntland waxay maraysaa in argagixiso cashuur ka qaado ganacsatadii.